ဧရိယာအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤစာရင်းသည် ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံများနှင့် ၎င်းတို့၏ အမှီအခိုနယ်မြေများအား ဧရိယာအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စာရင်းဖြစ်သည်။
စာရင်းတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို ISO 3166-1 စံနှုန်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ ISO 3166-1 စံနှုန်းအရ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသော နယ်မြေဒေသများသည် ဤစာရင်းတွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ အဆင့်နံပါတ်ကို တပ်ပေးထားခြင်း ရှိမည်တော့ မဟုတ်ပေ။ "မှတ်ချက်" ကော်လံတွင် အသိအမှတ်ပြု နိုင်ငံများနှင့် ၎င်းနိုင်ငံများအတွင်းပါဝင်သော အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိသော နယ်မြေများအကြား ရောထွေးမှုမဖြစ်စေရန် ရှင်းလင်းချက် ထည့်၍ပေးထားသည်။
ဤစာရင်းတွင် မပါဝင်သည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခြင်းစီမှ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြေညာထားကြသော အန္တတိကတိုက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ[မှတ်စု ၁]ကဲ့သို့ အချုပ်အခြာအရ အဆင့်တစ်ခုထိရှိပြီး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) အမှီအခိုနယ်မြေဟု မဆိုထိုက်သော သီးခြားတည်ရှိနေရာ အရာများ၊ ဆီးလန်းနယ်ကဲ့သို့ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသော မိုက်ခရိုနေရှင်းများတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဤစာရင်းတွင် ဧရိယာများအား တိုင်းတာခြင်းကို သုံးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
စုစုပေါင်းဧရိယာ - နိုင်ငံတကာ နယ်စပ်စည်းမျဉ်းများနှင့် ကမ်းရိုးတန်းအတွင်းရှိ ကုန်းမြေနှင့် ရေထုဧရိယာ စုစုပေါင်းတို့၏ ပေါင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်းမြေဧရိယာ - နိုင်ငံတကာ နယ်စပ်စည်းမျဉ်းများနှင့် ကမ်းရိုးတန်းအတွင်းရှိ ကုန်းမြေ၏ စုစုပေါင်းဧရိယာဖြစ်ပြီး ရေထုဧရိယာမပါဝင်ပေ။
ရေထုဧရိယာ - နိုင်ငံတကာ နယ်စပ်စည်းမျဉ်းများနှင့် ကမ်းရိုးတန်းအတွင်းရှိ ကုန်းတွင်း ရေထု(ရေကန်၊ ရေလှောင်ကန်နှင့် မြစ်များ)၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာစုစုပေါင်းဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးရှိ ရေထု(အချို့သေးငယ်သော ပင်လယ်အော်များ) ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်နိုင်သည်။ သီးခြားမှတ်ချက်ပြု၍မှလွဲလျှင် ရေပိုင်နက်များ မပါဝင်ပါ။ ထိစပ် နယ်မြေများ(Contiguous zones)၊ သီးခြားစီပွားရေးနယ်မြေ(Exclusive economic zone)များ မပါဝင်ပါ။
ဤစာရင်းရှိ အချက်အလက်များကို ကုလသမဂ္ဂ စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှရရှိသော အချက်အလက်များအား ကိုးကားထားခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားရင်းမြစ်များမှ ကိုးကားခဲ့သော် သီးခြားမှတ်စုဖြင့် ဖော်ပြပါမည်။
၂ ဧရိယာအလိုက် နိုင်ငံနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေဒေသများ
၃ Graphical charts
၃.၁ Countries greater than 1.5 million km2
၃.၂ Countries less than 1.5 million km2
စတုရန်းကီလိုမီတာဖြင့် တိုင်းတာထားသော နိုင်ငံများ၏ဧရိယာအား အရောင်ကုဒ်များဖြင့် ပြသထားသော ကမ္ဘာမြေပုံ
ဧရိယာအလိုက် နိုင်ငံနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေဒေသများ[ပြင်ဆင်ရန်]
စုစုပေါင်းဧရိယာ km2 (mi2)
ကုန်းမြေဧရိယာ in km2 (mi2)
ရေထုဧရိယာ in km2 (mi2)
5000000000000000000♠ – ကမ္ဘာ 7014510072000000000♠၅၁၀,၀၇၂,၀၀၀
7000100000000000000♠1 ရုရှားနိုင်ငံ 7013170982460000000♠၁၇,၀၉၈,၂၄၆
(၂၇၈,၂၀၀) 4.21 ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကုန်းမြေထု၏ ၁၀.၉၉၅% ရှိသည်၊ ၎င်းနိုင်ငံ၏ အာရှတိုက်ဘက်အခြမ်းသည် အာရှတိုက်တွင် အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဥရောပတိုက်ဘက်တွင်ရှိသော အခြမ်းသည်လည်း အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၃,၉၆၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁,၅၃၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်)ရှိပြီး ဥရောပတိုက်တွင် အကြီးဆုံသော နိုင်ငံဖြစ်စေသည်။ [မှတ်စု ၂]
1vend – အန္တာတိကတိုက် 7013140000000000000♠၁၄,၀၀၀,၀၀၀
(၀)0၁၃,၇၂၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၅,၃၀၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) (98%) သော ကုန်းမြေဧရိယာမှာ ရေခဲများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ နိုင်ငံတစ်ခုမဟုတ်သော်ငြားလည်း တိုက်၏ ကုန်းမြေဧရိယာများကို နိုင်ငံအချို့မှာ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြေညာထားထားကြသည်။[မှတ်စု ၃]
7000200000000000000♠2 ကနေဒါနိုင်ငံ 7012998467000000000♠၉,၉၈၄,၆၇၀
(၃၄၄,၀၈၀) 8.93 Largest country in the Western Hemisphere by total area (second largest by land area, after United States), with the largest surface area of water. Total area and water area figures include area covered by freshwater only, and do not include internal waters (non-freshwater) of about 1,600,000 km2, or territorial waters of 200,000 km2
7000300000000000000♠3 တရုတ်နိုင်ငံ 7012959696100000000♠၉,၅၉၆,၉၆၁
(၁၀၄,၄၆၀) 2.82 Second largest country in Asia (though the largest located wholly within the continent), and second largest country in the world by land area. Excludes Taiwan, disputed territories with India, and disputed islands in the South China Sea. Figures for total area and water area also exclude all coastal and territorial waters.[မှတ်စု ၄]
7000400000000000000♠4 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ 7012952506700000000♠၉,၅၂၅,၀၆၇
(၂၆၄,၈၃၇) 3.96–6.97 Largest country in the Western Hemisphere by land area (second largest by total area, after Canada). Secondary figures for total area and water area denote the inclusion of all coastal and territorial waters into the statistical area.[မှတ်စု ၄]
7000500000000000000♠5 ဘရာဇီးနိုင်ငံ 7012851576700000000♠၈,၅၁၅,၇၆၇
(၂၁,၃၇၂) 0.65 The largest Portuguese-speaking country, the largest country in South America and in the Southern Hemisphere, and the largest contiguous territory in the Americas.
7000600000000000000♠6 ဩစတြေးလျနိုင်ငံ 7012769202400000000♠၇,၆၉၂,၀၂၄
(၂၂,၅၇၁) 0.76 The largest country in Oceania, the largest country without land borders, and the largest country completely in the Southern Hemisphere.[မှတ်စု ၅]
7000700000000000000♠7 အိန္ဒိယနိုင်ငံ 7012328726300000000♠၃,၂၈၇,၂၆၃
(၁၂၁,၂၆၄) 9.55 Third largest country in Asia, largest country in South Asia, and the largest Hindi-speaking country. [မှတ်စု ၆]
7000800000000000000♠8 အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ 7012278040000000000♠၂,၇၈၀,၄၀၀
(၁၆,၈၈၀) 1.57 The largest Spanish-speaking country and second largest country in South America.[မှတ်စု ၇]
7000900000000000000♠9 ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ 7012272490000000000♠၂,၇၂၄,၉၀၀
(၉,၇၀၀) 0.92 Largest landlocked country.
7001100000000000000♠10 အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ 7012238174100000000♠၂,၃၈၁,၇၄၁
(၀)0The largest Berber-speaking and Arabic-speaking country and largest country in Africa.[မှတ်စု ၈]
7001110000000000000♠11 ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂို ! ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 7012234485800000000♠၂,၃၄၄,၈၅၈
(၃၀,၀၄၀) 3.32 Largest wholly French-speaking country. Largest country in Sub-Saharan Africa. 2nd largest country in Africa, has the largest French-speaking City i.e. Kinshasa.
end – ဂရင်းလန်း (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) 7012216608600000000♠၂,၁၆၆,၀၈၆
(၀)0Part of the Kingdom of Denmark.[မှတ်စု ၉] Largest non-continental island in world.
7001120000000000000♠12 ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ 7012214969000000000♠၂,၁၄၉,၆၉၀
(၀)0Largest country in the Middle East.
7001130000000000000♠13 မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ 7012196437500000000♠၁,၉၆၄,၃၇၅
(၇,၈၉၀) 1.04 Second largest Spanish-speaking country and third largest country in North America. it also has the Largest Spanish Speaking City i.e. Mexico City.
7001140000000000000♠14 အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ 7012191093100000000♠၁,၉၁၀,၉၃၁
(၃၆,၀၀၀) 4.87 The largest country in South-east Asia. The largest archipelagic state and island state in the world by area and population.
7001150000000000000♠15 ဆူဒန်နိုင်ငံ 7012186148400000000♠၁,၈၆၁,၄၈၄
(၇၁၈,၇၂၃) 7006176505900000000♠not determined 7004964250000000000♠not determined 5.18not determined
[မှတ်စု ၁၀] Formerly the largest country in Africa. It is now the 3rd largest country in Africa.[မှတ်စု ၁၁]
7001160000000000000♠16 လစ်ဗျားနိုင်ငံ 7012175954000000000♠၁,၇၅၉,၅၄၀
7001170000000000000♠17 အီရန်နိုင်ငံ 7012164819500000000♠၁,၆၄၈,၁၉၅
(၄၅,၀၀၀) 7.07 [မှတ်စု ၁၂]
7001180000000000000♠18 မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ 7012156411000000000♠၁,၅၆၄,၁၁၀
(၄,၀၈၀) 0.68 Largest landlocked country that does not borderaclosed sea.
7001190000000000000♠19 ပီရူးနိုင်ငံ 7012128521600000000♠၁,၂၈၅,၂၁၆
(၂,၀၂၀) 0.41 Third largest Spanish-speaking country and third largest country in South America.
7001200000000000000♠20 ချဒ်နိုင်ငံ 7012128400000000000♠၁,၂၈၄,၀၀၀
(၉,၆၀၀) 1.93 Third largest landlocked country and largest outside of Asia
7001210000000000000♠21 နိုင်ဂျာနိုင်ငံ 7012126700000000000♠၁,၂၆၇,၀၀၀
7001220000000000000♠22 အင်ဂိုလာနိုင်ငံ 7012124670000000000♠၁,၂၄၆,၇၀၀
7001230000000000000♠23 မာလီနိုင်ငံ 7012124019200000000♠၁,၂၄၀,၁၉၂
7001240000000000000♠24 တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ 7012122103700000000♠၁,၂၂၁,၀၃၇
7001250000000000000♠25 ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ 7012114174800000000♠၁,၁၄၁,၇၄၈
7001260000000000000♠26 အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ 7012110430000000000♠၁,၁၀၄,၃၀၀
(၄၀,၃၀၀) 0.7 [မှတ်စု ၁၃]
7001270000000000000♠27 ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ 7012109858100000000♠၁,၀၉၈,၅၈၁
7001280000000000000♠28 မော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံ 7012103070000000000♠၁,၀၃၀,၇၀၀
7001290000000000000♠29 အီဂျစ်နိုင်ငံ 7012100245000000000♠၁,၀၀၂,၄၅၀
7001300000000000000♠30 တန်ဇေးနီးယားနိုင်ငံ 7011945087000000000♠၉၄၅,၀၈၇
7001310000000000000♠31 နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ 7011923768000000000♠၉၂၃,၇၆၈
7001320000000000000♠32 ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ 7011916445000000000♠၉၁၆,၄၄၅
7001330000000000000♠33 ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ 7011881912000000000♠၈၈၁,၉၁၂
(၉,၇၄၀) 2.86 [မှတ်စု ၁၄]
7001340000000000000♠34 နမီးဘီးယားနိုင်ငံ 7011825615000000000♠၈၂၅,၆၁၅
7001350000000000000♠35 မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ 7011801590000000000♠၈၀၁,၅၉၀
7001360000000000000♠36 တူရကီနိုင်ငံ 7011783562000000000♠၇၈၃,၅၆၂
(၅,၃၈၀) 1.78 Transcontinental country located between Europe and Asia.
7001370000000000000♠37 ချီလီနိုင်ငံ 7011756102000000000♠၇၅၆,၁၀၂
(၄,၇၅၀) 1.63 [မှတ်စု ၁၅]
7001380000000000000♠38 ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ 7011752612000000000♠၇၅၂,၆၁၂
7001390000000000000♠39 မြန်မာနိုင်ငံ 7011676578000000000♠၆၇၆,၅၇၈
7001400000000000000♠40 အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ 7011652230000000000♠၆၅၂,၂၃၀
7001410000000000000♠41 တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ 7011644329000000000♠၆၄၄,၃၂၉
(၂၄၈,၇၇၇) 7005610953000000000♠not determined 7004333760000000000♠not determined 5.18not determined
[မှတ်စု ၁၀] [မှတ်စု ၁၆]
7001420000000000000♠42 ပြင်သစ်နိုင်ငံ 7011640679000000000♠၆၄၀,၆၇၉
(၁,၃၀၃) 0.52 Figures include metropolitan France (in Europe) as well as the five overseas regions. This does not include New Caledonia (an autonomous sui generis collectivity), the five autonomous overseas collectivities, and the two uninhabited territories (the French Southern and Antarctic Lands and Clipperton Island) which are listed individually, although also part of the French Republic.[မှတ်စု ၁၇] Largest member state of European Union and third largest country in Europe.
7001430000000000000♠43 ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ 7011637657000000000♠၆၃၇,၆၅၇
(၃,၉၈၀) 1.62 [မှတ်စု ၁၈]
7001440000000000000♠44 ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ 7011622984000000000♠၆၂၂,၉၈၄
7001450000000000000♠45 ယူကရိန်းနိုင်ငံ 7011603500000000000♠၆၀၃,၅၀၀
(၉,၃၀၀) 4.01 Largest country wholly in Europe.[မှတ်စု ၁၉]
7001460000000000000♠46 မဒါဂတ်စကားနိုင်ငံ 7011587041000000000♠၅၈၇,၀၄၁
7001470000000000000♠47 ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံ 7011581730000000000♠၅၈၁,၇၃၀
(၅,၈၀၀) 2.58 [မှတ်စု ၂၀]
7001480000000000000♠48 ကင်ညာနိုင်ငံ 7011580367000000000♠၅၈၀,၃၆၇
7001490000000000000♠49 ယီမင်နိုင်ငံ 7011527968000000000♠၅၂၇,၉၆၈
7001500000000000000♠50 ထိုင်းနိုင်ငံ 7011513120000000000♠၅၁၃,၁၂၀
7001510000000000000♠51 စပိန်နိုင်ငံ 7011505992000000000♠၅၀၅,၉၉၂
7001520000000000000♠52 တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ 7011488100000000000♠၄၈၈,၁၀၀
7001530000000000000♠53 ကင်မရွန်းနိုင်ငံ 7011475442000000000♠၄၇၅,၄၄၂
7001540000000000000♠54 ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ 7011462840000000000♠၄၆၂,၈၄၀
7001550000000000000♠55 ဆွီဒင်နိုင်ငံ 7011450295000000000♠၄၅၀,၂၉၅
7001560000000000000♠56 ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ 7011447400000000000♠၄၄၇,၄၀၀
7001570000000000000♠57 မော်ရိုကိုနိုင်ငံ 7011446550000000000♠၄၄၆,၅၅၀
(၉၇) 0.06 [မှတ်စု ၂၁]
7001580000000000000♠58 အီရတ်နိုင်ငံ 7011438317000000000♠၄၃၈,၃၁၇
(၃၇၀) 0.22 [မှတ်စု ၂၂]
7001590000000000000♠59 ပါရာဂွေးနိုင်ငံ 7011406752000000000♠၄၀၆,၇၅၂
7001600000000000000♠60 ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ 7011390757000000000♠၃၉၀,၇၅၇
7001610000000000000♠61 ဂျပန်နိုင်ငံ 7011377930000000000♠၃၇၇,၉၃၀
7001620000000000000♠62 ဂျာမနီနိုင်ငံ 7011357114000000000♠၃၅၇,၁၁၄
(၃,၂၂၀) 2.34 Largest country in Central Europe. Before the 1990 German reunification, West Germany was ၂၄၈,၅၇၇ (၉၅,၉၇၆) and East Germany was ၁၀၈,၃၃၃ (၄၁,၈၂၈).
7001630000000000000♠63 CongoR ! ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ 7011342000000000000♠၃၄၂,၀၀၀
7001640000000000000♠64 ဖင်လန်နိုင်ငံ 7011338424000000000♠၃၃၈,၄၂၄
(၁၃,၂၅၀) 10.15 [မှတ်စု ၂၃]
7001650000000000000♠65 ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ 7011331212000000000♠၃၃၁,၂၁၂
7001660000000000000♠66 မလေးရှားနိုင်ငံ 7011330803000000000♠၃၃၀,၈၀၃
7001670000000000000♠67 နော်ဝေးနိုင်ငံ 7011323802000000000♠၃၂၃,၈၀၂
(၇,၅၄၀) 6.03 [မှတ်စု ၂၄]
7001680000000000000♠68 အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံ 7011322463000000000♠၃၂၂,၄၆၃
7001690000000000000♠69 ပိုလန်နိုင်ငံ 7011312696000000000♠၃၁၂,၆၉၆
7001700000000000000♠70 အိုမန်နိုင်ငံ 7011309500000000000♠၃၀၉,၅၀၀
7001710000000000000♠71 အီတလီနိုင်ငံ 7011301336000000000♠၃၀၁,၃၃၆
7001720000000000000♠72 ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ 7011300000000000000♠၃၀၀,၀၀၀
7001730000000000000♠73 အီကွေဒေါနိုင်ငံ 7011276841000000000♠၂၇၆,၈၄၁
(၂,၅၉၀) 2.37 [မှတ်စု ၂၅]
7001740000000000000♠74 ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ 7011274222000000000♠၂၇၄,၂၂၂
(၂၄၀) 0.23 [မှတ်စု ၂၆]
7001750000000000000♠75 နယူးဇီလန်နိုင်ငံ 7011270467000000000♠၂၇၀,၄၆၇
(၁,၆၉၇) 1.65 [မှတ်စု ၂၇]
7001760000000000000♠76 ဂါဘွန်နိုင်ငံ 7011267668000000000♠၂၆၇,၆၆၈
end – အနောက်ဆဟာရ 7011266000000000000♠၂၆၆,၀၀၀
(၀)0Disputed territory.[မှတ်စု ၂၈]
7001770000000000000♠77 ဂီနီနိုင်ငံ 7011245857000000000♠၂၄၅,၈၅၇
7001780000000000000♠78 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ 7011242495000000000♠၂၄၂,၄၉၅
Largest island country in Europe and Western Hemisphere. [မှတ်စု ၂၉]
7001790000000000000♠79 ယူဂန်းဒါးနိုင်ငံ 7011241550000000000♠၂၄၁,၅၅၀
7001800000000000000♠80 ဂါနာနိုင်ငံ 7011238533000000000♠၂၃၈,၅၃၃
7001810000000000000♠81 ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ 7011238397000000000♠၂၃၈,၃၉၇
7001820000000000000♠82 လာအိုနိုင်ငံ 7011236800000000000♠၂၃၆,၈၀၀
7001830000000000000♠83 ဂိုင်ယာနာနိုင်ငံ 7011214969000000000♠၂၁၄,၉၆၉
7001840000000000000♠84 ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ 7011207600000000000♠၂၀၇,၆၀၀
(၁,၈၀၀) 2.26 Largest landlocked country in Europe.
7001850000000000000♠85 ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ 7011199951000000000♠၁၉၉,၉၅၁
7001860000000000000♠86 ဆီနီဂေါနိုင်ငံ 7011196722000000000♠၁၉၆,၇၂၂
7001870000000000000♠87 ဆီးရီးယားနိုင်ငံ 7011185180000000000♠၁၈၅,၁၈၀
(၆၀၀) 0.84 [မှတ်စု ၃၀]
7001880000000000000♠88 ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ 7011181035000000000♠၁၈၁,၀၃၅
7001890000000000000♠89 ဥရုဂွေးနိုင်ငံ 7011176215000000000♠၁၇၆,၂၁၅
end – ဆိုမာလီလန်း 7011176120000000000♠၁၇၆,၁၂၀
(၆၈,၀၀၀) [မှတ်စု ၃၁]
7001900000000000000♠90 ဆူရာနမ်နိုင်ငံ 7011163820000000000♠၁၆၃,၈၂၀
(၃,၀၂၀) 4.77 Smallest country in South America.
7001910000000000000♠91 တူနီးရှားနိုင်ငံ 7011163610000000000♠၁၆၃,၆၁၀
7001920000000000000♠92 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ 7011147570000000000♠၁၄၇,၅၇၀
(၅,၃၄၀) 9.6 [မှတ်စု ၃၂]
7001930000000000000♠93 နီပေါနိုင်ငံ 7011147181000000000♠၁၄၇,၁၈၁
(၁,၄၈၀) 2.6 Largest country in the Himalayan range
7001940000000000000♠94 တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ 7011143100000000000♠၁၄၃,၁၀၀
7001950000000000000♠95 ဂရိနိုင်ငံ 7011131990000000000♠၁၃၁,၉၉၀
7001960000000000000♠96 နီကာရာဂွါနိုင်ငံ 7011130373000000000♠၁၃၀,၃၇၃
(၄,၀၁၀) 7.96 Largest country in Central America.
7001970000000000000♠97 KoreaN ! မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ 7011120540000000000♠၁၂၀,၅၄၀
7001980000000000000♠98 မာလဝီနိုင်ငံ 7011118484000000000♠၁၁၈,၄၈၄
7001990000000000000♠99 အီရီထရီးယားနိုင်ငံ 7011117600000000000♠၁၁၇,၆၀၀
7002100000000000000♠100 ဘီနင်နိုင်ငံ 7011114763000000000♠၁၁၄,၇၆၃
(၁၇၆.၆၆၈) 0.40 [မှတ်စု ၃၃]
7002101000000000000♠101 ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ 7011112492000000000♠၁၁၂,၄၉၂
7002102000000000000♠102 လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ 7011111369000000000♠၁၁၁,၃၆၉
7002103000000000000♠103 ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ 7011110879000000000♠၁၁၀,၈၇၉
7002104000000000000♠104 ကျူးဘားနိုင်ငံ 7011109884000000000♠၁၀၉,၈၈၄
(၄၀၀) 0.94 Largest country in Caribbean
7002105000000000000♠105 ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ 7011108889000000000♠၁၀၈,၈၈၉
7002106000000000000♠106 အိုက်စလန်နိုင်ငံ 7011103000000000000♠၁၀၃,၀၀၀
7002107000000000000♠107 KoreaS ! တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ 7011100210000000000♠၁၀၀,၂၁၀
7002108000000000000♠108 ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ 7010930280000000000♠၉၃,၀၂၈
7002109000000000000♠109 ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ 7010920900000000000♠၉၂,၀၉၀
7002110000000000000♠110 ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ 7010893420000000000♠၈၉,၃၄၂
7002111000000000000♠111 ဆားဘီးယားနိုင်ငံ 7010883610000000000♠၈၈,၃၆၁
(၄၄) 0.13 [မှတ်စု ၃၄]
7002112000000000000♠112 အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ 7010866000000000000♠၈၆,၆၀၀
(၁၉၀) 0.13 Largest country in Caucasus.[မှတ်စု ၃၅]
7002113000000000000♠113 ဩစတြီးယားနိုင်ငံ 7010838710000000000♠၈၃,၈၇၁
7002114000000000000♠114 အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ 7010836000000000000♠၈၃,၆၀၀
7002115000000000000♠115 ချက်သမ္မတနိုင်ငံ 7010788650000000000♠၇၈,၈၆၅
7002116000000000000♠116 ပနားမားနိုင်ငံ 7010754170000000000♠၇၅,၄၁၇
7002117000000000000♠117 ဆီရာလီယွန်နိုင်ငံ 7010717400000000000♠၇၁,၇၄၀
7002118000000000000♠118 အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ 7010702730000000000♠၇၀,၂၇၃
(၅၄၀) 1.98 The figure shown is for the Republic of Ireland, the island of Ireland is ၈၄,၄၂၁ km2 or ၃၂,၅၉၅ sq mi
7002119000000000000♠119 ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ 7010697000000000000♠၆၉,၇၀၀
(၀)0[မှတ်စု ၃၆]
7002120000000000000♠120 သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ 7010656100000000000♠၆၅,၆၁၀
7002121000000000000♠121 လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ 7010653000000000000♠၆၅,၃၀၀
7002122000000000000♠122 လတ်ဗီယာနိုင်ငံ 7010645590000000000♠၆၄,၅၅၉
end – တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Svalbard (နော်ဝေးနိုင်ငံ) 7010620450000000000♠၆၂,၀၄၅
(၀)0[မှတ်စု ၃၇]
7002123000000000000♠123 တိုဂိုနိုင်ငံ 7010567850000000000♠၅၆,၇၈၅
7002124000000000000♠124 ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ 7010565940000000000♠၅၆,၅၉၄
7002125000000000000♠125 ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ 7010512090000000000♠၅၁,၂၀၉
7002126000000000000♠126 ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ 7010511000000000000♠၅၁,၁၀၀
7002127000000000000♠127 ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ 7010490370000000000♠၄၉,၀၃၇
7002128000000000000♠128 ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ 7010486710000000000♠၄၈,၆၇၁
7002129000000000000♠129 အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံ 7010452270000000000♠၄၅,၂၂၇
7002130000000000000♠130 ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ 7010430940000000000♠၄၃,၀၉၄
(၂၅၀) 1.53 Metropolitan Denmark only, without Greenland and the Faroe Islands.[မှတ်စု ၃၈]
7002131000000000000♠131 Netherlands ! နယ်သာလန်နိုင်ငံ 7010418500000000000♠၄၁,၈၅၀
(၂,၉၅၀) 18.41 Includes the special municipalities, but excludes other countries in the Kingdom of the Netherlands, shown separately.[မှတ်စု ၃၉]
7002132000000000000♠132 ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ 7010412840000000000♠၄၁,၂၈၄
(၄၉၀) 3.1 [မှတ်စု ၄၀]
7002133000000000000♠133 ဘူတန်နိုင်ငံ 7010383940000000000♠၃၈,၃၉၄
7002134000000000000♠134 ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ 7010361930000000000♠၃၆,၁၉၃
(၁,၄၄၀) 10.34 Between 1945 and 1949, the Republic of China included Mainland China, Mongolia, Taiwan and other areas, totaling ၁၁,၄၁၈,၁၇၄ km2 (၄,၄၀၈,၅၈၂ sq mi).[မှတ်စု ၄၁]
7002135000000000000♠135 Guinea-Bissau 7010361250000000000♠၃၆,၁၂၅
7002136000000000000♠136 မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ 7010338460000000000♠၃၃,၈၄၆
(၃၇၀) 2.84 [မှတ်စု ၄၂]
7002137000000000000♠137 ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ 7010305280000000000♠၃၀,၅၂၈
7002138000000000000♠138 လီဆိုသိုနိုင်ငံ 7010303550000000000♠၃၀,၃၅၅
7002139000000000000♠139 အာမေးနီးယားနိုင်ငံ 7010297430000000000♠၂၉,၇၄၃
7002140000000000000♠140 ဆော်လမွန်ကျွန်းစု 7010288960000000000♠၂၈,၈၉၆
7002141000000000000♠141 အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ 7010287480000000000♠၂၈,၇၄၈
7002142000000000000♠142 အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ 7010280510000000000♠၂၈,၀၅၁
7002143000000000000♠143 ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံ 7010278340000000000♠၂၇,၈၃၄
7002144000000000000♠144 ဟေတီနိုင်ငံ 7010277500000000000♠၂၇,၇၅၀
7002145000000000000♠145 ရဝမ်ဒါနိုင်ငံ 7010263380000000000♠၂၆,၃၃၈
7002146000000000000♠146 မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ 7010257130000000000♠၂၅,၇၁၃
7002147000000000000♠147 ဂျီဘူတီနိုင်ငံ 7010232000000000000♠၂၃,၂၀၀
7002148000000000000♠148 ဘလိဇ်နိုင်ငံ 7010229660000000000♠၂၂,၉၆၆
7002149000000000000♠149 အယ်ဆာဗေဒိုနိုင်ငံ 7010210410000000000♠၂၁,၀၄၁
(၁၂၀) 1.52 Smallest country in continental North America.
7002150000000000000♠150 အစ္စရေးနိုင်ငံ 7010207700000000000♠၂၀,၇၇၀
(၁၇၀) 2.12 [မှတ်စု ၄၃]
7002151000000000000♠151 ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ 7010202730000000000♠၂၀,၂၇၃
end – နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) 7010185750000000000♠၁၈,၅၇၅
7002152000000000000♠152 ဖီဂျီနိုင်ငံ 7010182720000000000♠၁၈,၂၇၂
7002153000000000000♠153 ကူဝိတ်နိုင်ငံ 7010178180000000000♠၁၇,၈၁၈
7002154000000000000♠154 ဆွာဇီလန်နိုင်ငံ 7010173640000000000♠၁၇,၃၆၄
7002155000000000000♠155 အရှေ့တီမောနိုင်ငံ 7010149190000000000♠၁၄,၉၁၉
7002156000000000000♠156 Bahamas ! ဘဟားမားနိုင်ငံ 7010139430000000000♠၁၃,၉၄၃
7002157000000000000♠157 မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ 7010138120000000000♠၁၃,၈၁၂
7002158000000000000♠158 ဗနွားတူနိုင်ငံ 7010121890000000000♠၁၂,၁၈၉
end – ဖော့ကလန်ကျွန်းစု (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7010121730000000000♠၁၂,၁၇၃
7002159000000000000♠159 ကာတာနိုင်ငံ 7010115860000000000♠၁၁,၅၈၆
end – Artsakh 7010114580000000000♠၁၁,၄၅၈
(၄၆၀) 1 [မှတ်စု ၄၄] 5.000 km2. Armenian-controlled territories surrounding Nagorno-Karabakh by regions 11,5 km2.
7002160000000000000♠160 The Gambia ! ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ 7010112950000000000♠၁၁,၂၉၅
(၅၀၀) 11.47 Smallest country in continental Africa.
7002161000000000000♠161 ဂျမေကာနိုင်ငံ 7010109910000000000♠၁၀,၉၉၁
end – ကိုဆိုဗိုနိုင်ငံ 7010108870000000000♠၁၀,၈၈၇
(၄,၂၀၃) [မှတ်စု ၄၅]
7002162000000000000♠162 လက်ဘနွန်နိုင်ငံ 7010104520000000000♠၁၀,၄၅၂
(၆၆) 1.63 Second smallest country in continental Asia.
7002163000000000000♠163 ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ 7009925100000000000♠၉,၂၅၁
(၃.၉) 0.11 [မှတ်စု ၄၆]
end – ပေါ်တိုရီကိုနိုင်ငံ 7009910400000000000♠၉,၁၀၄
(၁,၁၇၉) 35.2 An American territory, it is the third largest island of the United States after the Big Island of Hawaii and Kodiak Island of Alaska. Also the smallest part of Hispanic America.
end – အက်ဘ်ခါဇီယာ 7009866000000000000♠၈,၆၆၀
(၃,၃၄၀) [မှတ်စု ၄၇]
end – French Southern and Antarctic Lands (France) 7009774700000000000♠၇,၇၄၇
(၃၀.၈) 1.03 Excludes claim on Adélie Land in Antarctica.[မှတ်စု ၄၈]
end – တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း United States Minor Outlying Islands 7009695941000000000♠၆,၉၅၉.၄၁
7002164000000000000♠164 တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Palestinian National Authority 7009602000000000000♠၆,၀၂၀
(၈၅) 3.9 [မှတ်စု ၄၉]
7002165000000000000♠165 ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ 7009576500000000000♠၅,၇၆၅
7002166000000000000♠166 ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂိုနိုင်ငံ 7009513000000000000♠၅,၁၃၀
end – ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (ပြင်သစ်) 7009416700000000000♠၄,၁၆၇
end – ထရန်နစ္စတြီးယား 7009416300000000000♠၄,၁၆၃
(၁,၆၀၇) [မှတ်စု ၅၀]
7002167000000000000♠167 ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ 7009403300000000000♠၄,၀၃၃
end – တောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့် တောင်ဆန်းဒဝစ်ကျွန်းများ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7009390300000000000♠၃,၉၀၃
(၀)0[မှတ်စု ၁၆]
end – တောင်အော်ဆက်တီးယား 7009390000000000000♠၃,၉၀၀
(၁,၅၀၀) [မှတ်စု ၅၁]
end – မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ 7009335500000000000♠၃,၃၅၅
(၁,၂၉၅) [မှတ်စု ၅၂]
7002168000000000000♠168 ဆမိုးအားနိုင်ငံ 7009284200000000000♠၂,၈၄၂
end – ဟောင်ကောင် (တရုတ်နိုင်ငံ) 7009275500000000000♠၂,၇၅၅
7002169000000000000♠169 လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ 7009258600000000000♠၂,၅၈၆
end – Bir Tawil (Terra nullius) 7009206000000000000♠၂,၀၆၀
7002170000000000000♠170 မော်ရစ်ရှနိုင်ငံ 7009204000000000000♠၂,၀၄၀
(၃.၉) 0.49 [မှတ်စု ၅၃]
7002171000000000000♠171 ကိုမိုရိုနိုင်ငံ 7009186200000000000♠၁,၈၆၂
(၀)0[မှတ်စု ၅၄]
end – Åland Islands (ဖင်လန်) 7009158000000000000♠၁,၅၈၀
(၆၁၀) [မှတ်စု ၅၅]
end – ဖရိုးကျွန်းစု (ဒိန်းမတ်) 7009139300000000000♠၁,၃၉၃
(၅၃၈) 6999100000000000000♠Negligible 0.001Negligible [မှတ်စု ၅၆]
7002172000000000000♠172 Sao Tome ! São Tomé and Príncipe 7008964000000000000♠၉၆၄
end – တာ့ခ်နှင့် ကေးကို့စ်ကျွန်းများ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7008948000000000000♠၉၄၈
7002173000000000000♠173 ကီရီဘတ်စ်နိုင်ငံ 7008811000000000000♠၈၁၁
(၀)0[မှတ်စု ၅၇]
7002174000000000000♠174 ဘာရိန်းနိုင်ငံ 7008765000000000000♠၇၆၅
(၀)0Smallest country in continental Asia.
7002175000000000000♠175 ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ 7008751000000000000♠၇၅၁
7002176000000000000♠176 တုံဂါနိုင်ငံ 7008747000000000000♠၇၄၇
7002177000000000000♠177 စင်ကာပူနိုင်ငံ 7008716000000000000♠၇၁၆
7002178000000000000♠178 Micronesia ! မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ 7008702000000000000♠၇၀၂
(၂၇၁) 6999100000000000000♠Negligible 0.001Negligible
7002179000000000000♠179 စိန့်လူစီယာနိုင်ငံ 7008616000000000000♠၆၁၆
(၃.၉) 1.62 [မှတ်စု ၅၈]
end – မမ်းကျွန်း (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7008572000000000000♠၅၇၂
end – တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း ဂူအမ်ကျွန်း (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) 7008549000000000000♠၅၄၉
7002180000000000000♠180 အင်ဒိုရာနိုင်ငံ 7008468000000000000♠၄၆၈
end – မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) 7008464000000000000♠၄၆၄
7002181000000000000♠181 ပလောင်းနိုင်ငံ 7008459000000000000♠၄၅၉
7002182000000000000♠182 ဆေးရှဲနိုင်ငံ 7008452000000000000♠၄၅၂
(၀)0Smallest country in Africa.
end – Curaçao (နယ်သာလန်) 7008444000000000000♠၄၄၄
(၀)0[မှတ်စု ၃၉]
7002183000000000000♠183 အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါနိုင်ငံ 7008442000000000000♠၄၄၂
7002184000000000000♠184 ဘာဘေးဒိုးစ်နိုင်ငံ 7008430000000000000♠၄၃၀
end – ဟာ့ထ်ကျွန်းနှင့် မက်ဒေါနယ်ကျွန်းစု (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) 7008412000000000000♠၄၁၂
7002185000000000000♠185 စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရိနေဒိုင်နိုင်ငံ 7008389000000000000♠၃၈၉
end – တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Jan Mayen (Norway) 7008377000000000000♠၃၇၇
end – United States Virgin Islands !တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်လန်း (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) 7008347000000000000♠၃၄၇
7002186000000000000♠186 ဂရီနေဒါနိုင်ငံ 7008344000000000000♠၃၄၄
7002187000000000000♠187 မော်လတာနိုင်ငံ 7008316000000000000♠၃၁၆
end – Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7008308000000000000♠၃၀၈
(၀)0[မှတ်စု ၅၉]
7002188000000000000♠188 မော်လဒိုက်နိုင်ငံ 7008300000000000000♠၃၀၀
(၀)0Smallest country in Asia.
end – Bonaire (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) 7008294000000000000♠၂၉၄
end – ကေမန်ကျွန်းစု (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7008264000000000000♠၂၆၄
7002189000000000000♠189 စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ်နိုင်ငံ 7008261000000000000♠၂၆၁
(၀)0Smallest country in the Americas and the Western Hemisphere.
end – နျူးအေးနိုင်ငံ (နယူးဇီလန်) 7008260000000000000♠၂၆၀
(၀)0[မှတ်စု ၆၀]
end – Akrotiri and Dhekelia (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7008253800000000000♠၂၅၃.၈
(၉၈.၀) 7002253800000000000♠not determined 6999100000000000000♠not determined 0.001not determined There isasalt lake and some wetlands of unknown area.
end – Saint Pierre and Miquelon (ပြင်သစ်) 7008242000000000000♠၂၄၂
end – တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း ကွက်ကျွန်းစု (နယူးဇီလန်) 7008236000000000000♠၂၃၆
(၀)0[မှတ်စု ၆၁]
end – အမေရိကန်ဆမိုးအား (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) 7008199000000000000♠၁၉၉
7002190000000000000♠190 မာရှယ်အိုင်းလန်း နိုင်ငံ 7008181000000000000♠၁၈၁
end – အာရူးဗာ (နယ်သာလန်) 7008180000000000000♠၁၈၀
7002191000000000000♠191 လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ 7008160000000000000♠၁၆၀
end – ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7008151000000000000♠၁၅၁
end – ဝေါလစ်နှင့်ဖူကျူးနား (ပြင်သစ်) 7008142000000000000♠၁၄၂
end – ခရစ္စမတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျ) 7008135000000000000♠၁၃၅
(၀)0[မှတ်စု ၆၂]
end – ဂျာဇီ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7008116000000000000♠၁၁၆
end – မွန်ဆာရတ် (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7008102000000000000♠၁၀၂
end – အန်ဂီလာ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7007910000000000000♠၉၁
end – ဂန်းစီးနိုင်ငံ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7007780000000000000♠၇၈
7002192000000000000♠192 ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ 7007610000000000000♠၆၁
end – ဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7007600000000000000♠၆၀
(၂၀,၉၈၀) 99.89 [မှတ်စု ၆၃]
end – Saint Martin (ပြင်သစ်) 7007540000000000000♠၅၄
(၂၁.၀) 6999100000000000000♠Negligible 0.001Negligible [မှတ်စု ၁၆]
end – ဘာမြူဒါ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7007540000000000000♠၅၄
end – ဘူးဗက်ကျွန်း (နော်ဝေးနိုင်ငံ) 7007490000000000000♠၄၉
end – တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း ပစ်ကိန်းကျွန်းစု (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7007470000000000000♠၄၇
(၀)0[မှတ်စု ၆၄]
end – နောဖုတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျ) 7007360000000000000♠၃၆
end – Sint Maarten (နယ်သာလန်) 7007340000000000000♠၃၄
end – မကာအို (တရုတ်နိုင်ငံ) 7007313000000000000♠၃၁.၃
(၀)0[မှတ်စု ၆၅]
7002193000000000000♠193 တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း တူဗာလူးနိုင်ငံ 7007260000000000000♠၂၆
(၀)0Smallest Commonwealth realm.
7002194000000000000♠194 တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း နာအူးရူးနိုင်ငံ 7007210000000000000♠၂၁
(၀)0Smallest island country, smallest republic and smallest country that isn'tacity-state.
end – Saint Barthélemy (ပြင်သစ်) 7007210000000000000♠၂၁
(၈.၁) 7001210000000000000♠not determined 6999100000000000000♠not determined 0.001not determined [မှတ်စု ၁၆]
end – Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) 7007210000000000000♠၂၁
(၈.၁) 7001210000000000000♠not determined 6999100000000000000♠not determined 0.001not determined
end – ကိုကိုး (ကီးလင်း) ကျွန်းများ (ဩစတြေးလျ) 7007140000000000000♠၁၄
end – Saba (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) 7007130000000000000♠၁၃
(၅.၀) 7001130000000000000♠not determined 6999100000000000000♠not determined 0.001not determined
end – တိုကလောင် (နယူးဇီလန်နိုင်ငံ) 7007120000000000000♠၁၂
end – ဂျီဘရောလ်တာနိုင်ငံ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7006600000000000000♠၆
(၀)0British Overseas territory
end – ကလစ်ပါတွန်ကျွန်းစု (ပြင်သစ်) 7006600000000000000♠၆
end – တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Ashmore and Cartier Islands (ဩစတြေးလျ) 7006500000000000000♠၅
end – တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Coral Sea Islands (ဩစတြေးလျ) 7000290000000000000♠<3
7002195000000000000♠195 မိုနာကိုနိုင်ငံ 7006202000000000000♠၂.၀၂
(၀)0Smallest country withacoastline.
7002196000000000000♠196 ဗာတီကန်စီးတီး 7005440000000000000♠၀.၄၄
(၀)0Smallest country in the world.
Countries greater than 1.5 million km2[ပြင်ဆင်ရန်]
Countries less than 1.5 million km2[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ The European Union isaunique supranational union. It coversatotal area of ၄,၄၇၉,၉၆၈ km2 (၁,၇၂၉,၇၂၅ sq mi), and would be ranked 7th if it were included (3.0% of world's total land area).
↑ ပုံတွင် ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်(၂၇,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၁၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) မပါဝင်ပေ၊ de facto အရ ရုရုားနိုင်ငံမှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
↑ ဖော်ပြပါနိုင်ငံများတို့သည် အန္တတိကတိုက်ရှိ မြေဧရိယာများကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြေညာထားကြသည်: အာဂျင်တီးနား (၉၆၉,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၃၇၄,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်), ဩစတြေးလျ (၅,၈၉၆,၅၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၂,၂၇၆,၇၀၀ စတုရန်းမိုင်), ချီလီ (၁,၂၅၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၄၈၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်), ပြင်သစ် (၄၃၂,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၁၆၇,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်), နယူးဇီလန် (၄၅၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၁၇၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်), နော်ဝေး (ပထမမြောက်ပီတာကျွန်းအပါအဝင်) (၂,၅၀၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၉၇၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) နှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (၁,၃၉၅,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၅၃၉,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်), တို့ဖြစ်ပြီး အချို့ဧရိယာများမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုကြေညာထားသော နိုင်ငံများ ထပ်၍နေသည်။ တမ်းပလိတ်:CoordAntarctic မှ တမ်းပလိတ်:CoordAntarctic ထိ (၂,၁၀၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ or ၈၁၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) ဧရိယာမှာ လက်ရှိတွင် ပိုင်ဆိုင်သူကြေညာထားခြင်းမရှိသော နယ်မြေဖြစ်သည်။ ထိုဧရိယာများတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များမှလွဲ၍ လူများနေထိုင်ကြခြင်း မရှိကြပေ။
↑ ၄.၀ ၄.၁ The following two primary sources (non-mirrored) represent the range (min./max.) of total area for China and the United States. Both sources (1) exclude Taiwan from the area of China; (2) exclude China's coastal and territorial waters However, the CIA World Factbook includes the United States coastal and territorial waters, while Encyclopædia Britannica excludes the United States coastal and territorial waters.
↑ Figures exclude the external territories of Norfolk Island, Ashmore and Cartier Islands, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Coral Sea Islands Territory, and Heard Island and McDonald Islands, each shown separately. Excludes the claim of the Australian Antarctic Territory (၅,၈၉၆,၅၀၀ km2 or ၂,၂၇၆,၇၀၀ sq mi). The UN's previous data, as well as the current data shown by the World Bank and the CIA, give the figure as ၇,၇၄၁,၂၂၀ km2 (၂,၉၈၈,၉၀၀ sq mi).
↑ The total area given is from Encyclopædia Britannica and includes disputed territories not under Indian control but claimed by India. The total area claimed by India, according to the figure given by the United Nations and the Indian government, totals ၃,၂၈၇,၂၆၃ km2 (၁,၂၆၉,၂၁၉ sq mi).
↑ Excludes claims on Argentine Antarctica (၉၆၉,၀၀၀ km2 or ၃၇၄,၀၀၀ sq mi), on Malvinas/Falkland Islands (၁၂,၁၇၃ km2 or ၄,၇၀၀ sq mi) and on South Georgia and the South Sandwich Islands (၃,၉၀၃ km2 or ၁,၅၀၇ sq mi).
↑ A total of ၁,၇၅၅,၆၃၆ km2 (၆၇၇,၈၅၅ sq mi) of land area is covered by ice; the ice-free area amounts to ၄၁၀,၄၅၀ km2 (၁၅၈,၄၈၀ sq mi).
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ The water area percentage of Sudan prior to the secession of South Sudan was 5.18.
↑ Prior to the independence of South Sudan in 2011, Sudan's total area as reported by the UN source was ၂,၅၀၅,၈၁၃ km2 (၉၆၇,၅၀၀ sq mi). Updated figure shown is from the CIA.
↑ The area given is from the 2007 data and the CIA World Factbook. The UN Demographic Yearbook listsafigure of ၁,၆၂၈,၇၅၀ km2 (၆၂၈,၈၆၀ sq mi), which refers to land area only.
↑ Excluding the Ilemi Triangle (၁၄,၀၀၀ km2 or ၅,၄၀၀ sq mi).
↑ Includes data for Pakistani-claimed territories of Kashmir, Azad Kashmir (၁၃,၂၉၇ km2 or ၅,၁၃၄ sq mi) and Gilgit–Baltistan (၇၂,၅၂၀ km2 or ၂၈,၀၀၀ sq mi). Excluding these territories would produce an area figure of ၇၉၆,၀၉၅ km2 (၃၀၇,၃၇၄ sq mi).
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ ၁၆.၂ ၁၆.၃ ၁၆.၄ ၁၆.၅ ၁၆.၆ Figures shown in this entry are taken from the CIA.
↑ Source gives area of metropolitan France as ၅၅၁,၅၀၀ km2 (၂၁၂,၉၀၀ sq mi) and lists overseas regions separately, whose areas sum to ၈၉,၁၇၉ km2 (၃၄,၄၃၂ sq mi). Adding these give the total shown here for the entire French Republic. The CIA reports the total as ၆၄၃,၈၀၁ km2 (၂၄၈,၅၇၃ sq mi). Another source, the French National Institute for Statistics and Economic Studies, gives an area figure of ၆၃၂,၇၅၉ km2 (၂၄၄,၃၁၀ sq mi). (The CIA givesawater area of metropolitan France as ၁,၅၃၀ km2 (၅၉၀ sq mi).)
↑ The figure shown includes the area of Somaliland (၁၃၇,၆၀၀ km2 or ၅၃,၁၀၀ sq mi), which is de facto independent from Somalia.
↑ The figure shown includes the area of Crimea (၂၇,၀၀၀ km2 or ၁၀,၀၀၀ sq mi), de facto controlled by Russia, but claimed by Ukraine and internationally recognised as part of it.
↑ Figure shown is from the 2007 data and the CIA World Factbook. The UN figure of ၄၃၅,၂၄၄ km2 (၁၆၈,၀၄၉ sq mi) excludes the three autonomous provinces of Iraqi Kurdistan.
↑ Includes the Åland Islands (၁,၅၅၂ km2 or ၅၉၉ sq mi).
↑ Figures shown are from the CIA World Factbook; the UN data refers to mainland area only. All figures exclude Svalbard, Jan Mayen and Bouvet Island, shown separately, and the Antarctic territorial claims of Queen Maud Land and Peter I Island (၂၄၃ km2 or ၉၄ sq mi).
↑ May or may not include the Galápagos Islands (၇,၈၈၀ km2 or ၃,၀၄၀ sq mi). The 2007 data, as well as the current data given by the CIA, explicitly includes the Galápagos and gives the figure as ၂၈၃,၅၆၁ km2 (၁၀၉,၄၈၄ sq mi).
↑ The government gives the total figure as ၂၆၆,၈၃၈ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁၀၃,၀၂၇ စတုရန်းမိုင်). CIA World Factbook has total/land area of ၂၆၇,၇၁၀ km2 (၁၀၃,၃၆၀ sq mi). All figures exclude Niue, the Cook Islands and Tokelau, shown separately, as well as the Antarctic claim of Ross Dependency.
↑ Does not include the three Crown dependencies (၇၆၈ km2 or ၂၉၇ sq mi) and the 14 overseas territories (၁,၇၄၂,၈၅၇ km2 or ၆၇၂,၉၂၁ sq mi), shown separately.
↑ Includes the parts of the Golan Heights (၁,၂၉၅ km2 or ၅၀၀ sq mi) occupied by Israel.
↑ Area according to Bangladesh Bureau of Statistics is ၁၄၇,၅၇၀ km2 or ၅၆,၉၈၀ sq mi.
↑ Benin's official total area increased from ၁၁၂,၆၂၂ km2 (၄၃,၄၈၄ sq mi) to ၁၁၄,၇၆၃ km2 (၄၄,၃၁၀ sq mi) following the resolution of the Lete Island dispute in 2005. The water area is that reported by the Food and Agriculture Organization and the land area is the difference between these two figures, rounded to the nearest square kilometre.
↑ The figure shown includes the area of Kosovo and Metohija, which is de facto independent from Serbia as the Republic of Kosovo (၁၀,၈၈၇ km2 or ၄,၂၀၃ sq mi). The area of Serbia without Kosovo is ၇၇,၄၇၄ km2 (၂၉,၉၁၃ sq mi).
↑ The figure shown includes the area of the Nagorno-Karabakh Republic (၁၁,၄၅၈ km2 or ၄,၄၂၄ sq mi), which is de facto independent from Azerbaijan.
↑ The figure shown includes the areas of Abkhazia (၈,၆၆၀ km2 or ၃,၃၄၀ sq mi) and South Ossetia (၃,၉၀၀ km2 or ၁,၅၀၀ sq mi), both de facto independent from Georgia.
↑ The UN givesacombined area for Svalbard and Jan Mayen as ၆၂,၄၂၂ km2 (၂၄,၁၀၁ sq mi). The separate figures shown are from the CIA World Factbook.
↑ The UN figure includes only the constituent country Denmark; the entire Kingdom of Denmark, including Greenland and the Faroe Islands covers ၂,၂၂၀,၀၉၃ km2 (၈၅၇,၁၈၃ sq mi) and would be 12th.
↑ ၃၉.၀ ၃၉.၁ ၃၉.၂ Data for the Netherlands is from the Central Bureau of Statistics. Source gives area of European Netherlands as ၄၁,၅၂၈ km2 (၁၆,၀၃၄ sq mi) and lists the three special municipalities separately, whose areas sum to ၃၂၂ km2 (၁၂၄ sq mi). Adding these gives the total shown here for the entire country of the Netherlands. Adding the constituent countries of Aruba, Curaçao and Sint Maarten, the total area of the Kingdom of the Netherlands covers ၄၂,၅၀၈ km2 (၁၆,၄၁၂ sq mi).
↑ The figure from the UN demographic yearbook (၄၁,၂၇၇ km2 or ၁၅,၉၃၇ sq mi) excludes the areas of state forests and communanzas,တမ်းပလိတ်:Elucidate which amount to ၇.၁၅ km2 (၂.၇၆ sq mi). The figure here is from the 2007 data.
↑ The UN source does not include data for the Republic of China on Taiwan. The figure shown is from the 2012 Statistical Data from the Ministry of the Interior, Republic of China. The CIA givesatotal area of ၃၅,၉၈၀ km2 (၁၃,၈၉၀ sq mi). The total constitutional land area of the Republic of China is ၁၁,၄၂၀,၀၀၀ km2 (၄,၄၁၀,၀၀၀ sq mi), which includes modern-day Taiwan, Mongolia, and Mainland China.
↑ The figure shown includes the area of Transnistria (၄,၁၆၃ km2 or ၁,၆၀၇ sq mi), which is de facto independent from Moldova.
↑ Figures shown are from the CIA. The UN/Israel Central Bureau of Statistics figure of ၂၂,၀၇၂ km2 (၈,၅၂၂ sq mi) includes the Golan Heights (၁,၂၀၀ km2 or ၄၆၀ sq mi) and East Jerusalem (၇၀ km2 or ၂၇ sq mi), which are not internationally recognised as part of Israel.
↑ Includes the largely unrecognized but de facto independent Northern Cyprus (၃,၃၅၅ km2 or ၁,၂၉၅ sq mi), the UN buffer zone (၃၄၆ km2 or ၁၃၄ sq mi) and Akrotiri and Dhekelia (၂၅၄ km2 or ၉၈ sq mi).
↑ The CIA gives the areas of the West Bank and the Gaza Strip separately as ၅,၈၆၀ km2 (၂,၂၆၀ sq mi) and ၃၆၀ km2 (၁၄၀ sq mi) respectively (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html). The figure for the West Bank includes East Jerusalem and Jerusalem No Man's Land, but excludes Mount Scopus.
↑ Figure shown is from the CIA World Factbook. The UN figure of ၁,၉၆၉ km2 (၇၆၀ sq mi) excludes the Agaléga Islands and Cargados Carajos.
↑ The CIA World Factbook and the UN give an area of ၂,၂၃၅ km2 (၈၆၃ sq mi), which includes Mayotte (၃၇၄ km2 (၁၄၄ sq mi)), an overseas department of France.
↑ The figure shown is from the CIA World Factbook, and refers to land area only. The UN figure excludes ၈၄ km2 (၃၂ sq mi) of uninhabited islands.
↑ The figure shown is from the CIA Factbook. The UN value of ၅၃၉ km2 (၂၀၈ sq mi) refers to habitable area only and excludes the country's central forest reserve.
↑ The total area of Saint Helena is ၁၂၂ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၄၇ စတုရန်းမိုင်), Ascension Island is ၈၈ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၃၄ စတုရန်းမိုင်), and Tristan da Cunha is ၉၈ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၃၈ စတုရန်းမိုင်).
↑ ၆၂.၀ ၆၂.၁ Data is from the 2007 statistics.
↑ The figure shown is from the CIA Factbook, and includes Henderson, Ducie, and Oeno Island. The UN figure is ၅ km2 or ၁.၉ sq mi, and only includes area for Pitcairn island itself, the only inhabited island in the group.
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ ၁.၁၃ ၁.၁၄ ၁.၁၅ ၁.၁၆ ၁.၁၇ ၁.၁၈ Field Listing – Area Archived 31 January 2014 at the Wayback Machine., The World Factbook, Central Intelligence Agency. Data last updated on July 26, 2017.
↑ Central Intelligence Agency။ Definitions and notes: Location။ The World Factbook။ Government of the United States။ 26 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၄ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Source, unless otherwise specified: "Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density" (PDF) (2012). United Nations Statistics Division. Retrieved on 29 November 2014. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2012.htm Entries in this table giving figures other than the figures given in this source are explained in the associated မှတ်စု.
↑ Canada၊ Government of Canada, Statistics။ Land and freshwater area, by province and territory။
↑ Branch၊ Government of Canada, Fisheries and Oceans Canada, Communications။ Oceans။
↑ China။ Encyclopædia Britannica။ 2017-12-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ United States။ Encyclopædia Britannica။ 2017-12-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ China။ CIA။ 13 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ United States။ CIA။6July 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 31 Years of CIA World Factbook။ CIA။ 31 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IBGE: Official Territorial Area။
↑ Geoscience Australia။ Area of Australia – States and Territories။ Government of Australia။ 25 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ ၁၃.၂ ၁၃.၃ ၁၃.၄ ၁၃.၅ ၁၃.၆ Total surface area as of 19 January 2007။ United Nations Statistics Division။ 30 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ Surface area (sq. km)။ United Nations: World Development Indicators။ 27 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Area and Population။ Government of India။ 26 December 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan (ASRK). 2005. Main Demographic Indicators. Available at http://stat.gov.kz
↑ Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Algeria (PDF) (အစီရင်ခံစာ) (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ FAO။ p. 12။ 29 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia။ The World Factbook။ CIA။ 10 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GeoHive – Pakistan population statistics။ 2013-04-06 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Botswana (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ FAO။ p. 14။ 29 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Quelques chiffres clefs du Burkina Faso"။ Annuaire statistique 2013 (PDF) (အစီရင်ခံစာ) (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ INSD။ December 2014။ p. 413။ 27 February 2015 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Burkina Faso (PDF) (အစီရင်ခံစာ) (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ FAO။ p. 28။ 29 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The New Zealand Land Cover Database Archived 14 March 2011 at the Wayback Machine., New Zealand Ministry for the Environment. Updated 1 July 2009.
↑ Bangladesh Bureau of Statistics။ Bangladesh Bureau of Statistics။4September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ La superficie du Bénin passe de 112.622 km2 à 113.440 km2 (in fr) (15 August 2007)။ 29 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Benin (PDF) (အစီရင်ခံစာ) (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ FAO။ p. 10။ 29 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Geography of Ireland။ 2009-11-24 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-10-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ South Ossetia Archived 12 November 2013 at the Wayback Machine. at World English Dictionary
↑ Central Bureau of Statistics (2009)၊ Land – en tuinbouwcijfers, 2009 (PDF) (Dutchဘာသာစကားဖြင့်)၊ Government of the Netherlands, Department of Publication and Information၊ p. 14၊ ISSN 1386-9566၊6January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ Central Bureau of Statistics (2009)၊ Statistical Yearbook of the Netherlands Antilles, 2009၊ Willemstad: Government of the Netherlands, Department of Publication and Information၊ p.4|access-date= က |url= ကို လိုအပ်သည် (အကူအညီ)
↑ 1.1 Number of Villages, Neighborhoods, Households and Resident Population (PDF)။ Ministry of the Interior – Republic of China (Taiwan)။ 19 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ French Southern and Antarctic Lands Archived 24 December 2018 at the Wayback Machine., CIA Factbook, as of December 29, 2010.
↑ Survey and Mapping Office – Circulars and Publications။
↑ The World Factbook။ 31 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဧရိယာအလိုက်_နိုင်ငံနှင့်_နယ်မြေဒေသများ_စာရင်း&oldid=727981" မှ ရယူရန်
CS1 ပြင်သစ်-ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (fr)
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။